सुशान्त सिंहसँग ६ व;र्षसम्म ‘लि’भ इन रि’लेसन’मा बसेकी अंकिताले लेखिन् मन छुने स्टाटस…. – Jagaran Nepal
सुशान्त सिंहसँग ६ व;र्षसम्म ‘लि’भ इन रि’लेसन’मा बसेकी अंकिताले लेखिन् मन छुने स्टाटस….
एजेन्सी । महेन्द्र सिंह धोनीको बायोपिकमा बनेको फिल्ममा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने सुशान्त सिंह राजपूतले आत्त्यामह, गरेकाम छन् । मुम्बईको बान्द्रास्थिती फ्ल्याटमा उनको शव भेटिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएको छ । उनले किन आ;त्त्यामह; गरे भन्ने बारे जानकारी प्राप्त छैन । मिडिया रिपोटएका अनुसार सुशान्तका सहयोगीले यस घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी दिएका हुन् ।
त्यसपछि ‘पवित्र रिश्ता’ सिरियलमार्फत् उनले चर्चा पाए । उनी डान्स रियालिटी शो जरा नच के दिखा र झलक दिखलाजामा पनि देखिए । उनले काय पो चे, शुद्ध देसी रोमान्स, पीके र केदारनाथ फिल्ममा काम गरेका छन् । सुशान्तकी पूर्व म्यानेजरको पनि केहि दिनअघि एउटा भवनको १४ औं तल्लाबाट खसेर मृ त्यु भएको थियो ।
अभिनेत्री अंकिता लोखन्डेले सुशान्त सिंह राजपुतको नि’धन पछि इन्स्टाग्रामा भावुक स्टाटस लेखेकी छिन् । टीभी सिरियल ‘पवित्र रिश्ता’ बाट चर्चामा आएकी अंकिताले कंगना रनाबतसँग फिल्म ‘मणिकर्णिका’ बाट बलिउडमा डेब्यु गररेकी छिन् । र सुशान्तसँग ६ वर्षसम्म लिभ इन सम्बन्धमा बसेकी उनले लेखेको स्टाटस अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ ।
राजपुतले आइतबार आ,त्त्यामह, गरे तर उनले के कारणले आ.त्त्यामह. गरे भन्ने बारे खुलेको छ्रैन् । अंकिता र सुशान्तले सन् २००९ मा जीटीभीको शो पवित्र रिश्तामा मुख्य भूमिका निभाएका थिए। उक्त शो २०१४ सम्म चलेको थियो। उनीहरु लिभ इन सम्बन्धमा थिए । दुबै ६ वर्षसम्म लिभ इन रिलेसनमा रहेपनि सन् २०१६ मा ब्रेकअप भएको थियो । तर, अहिले अंकिता व्यापारी विक्की जैनसँग रिलेसनमा बस्दै आएकी छिन् । सुशान्त सिंह राजपुत र अंकिता लोखन्डे पवित्र रिश्तामा पति पत्निको भुमिका निभाएका थिए ।